JEFFERSONIA WAA SU'AAL: BEERASHADA IYO DARYEELKA, SII KORDHAYA ABUURKA, SAPLING IYO KALA QAYBINTA BAADIYAHA GURIGA. DAAWEYNTA CUDURADA - SOOSAARKA DALAGGA
Jeffersonian shaki: beeritaanka, daryeel iyo bogsiinta sifooyinka geedka
Beerta si fiican loo ilaaliyo waa meel aad u fiican oo aad ku raaxeysan karto jidhkaaga iyo naftaada. Si kastaba ha ahaatee, si ay u koraan dhirta quruxda badan iyo caafimaad leh ma aha mid fudud, iyo in la abuuro nidaam ubax beerta mararka qaarkood waa wax aan macquul aheyn. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa dhirta qurxinta quruxda badan ee jefferson - sida ay u egyahay, sida loo daryeelo iyo sida loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka.
Jeffersonian shaki kuma jiro - Cawska-dheeriga, kaas oo iska leh qoyska Barberry. Jeffersonium waxay ku koraan qaab duurka yar yar oo ilaa 40 cm ah. Leaves iyo ubaxyo biqilka tooska ah ee ka soo jeeda beerto.
Ma taqaanaa? Jeffersonia ayaa magacyaddan lagu siiyay sharafta Thomas Jefferson, oo ah madaxweynaha saddexaad ee Maraykanka. Wuxuu ahaa khabiir iyo khabiir ku saabsan dhirta. Thanks to dadaalladiisa 1801, beerta ugu horeysay beerta botanical ayaa la furay.
Leaves koraan guga hore; marka ugu horeysa waxay yihiin guduud-cas, oo midabkooda ku beddelan waqti. Caleemaha qaangaarka ah waa wareegsan, qiyaastii 5 cm dhexroor, cagaaran midab leh xudduudka caleenta ee geesaha. Waxay leedahay calaamad gaar ah - qiyaasta jilicsan ee dhinaca sare. Caleemaha waxay sii wadaan inay koraan ka dib markii ubax, hurdo gaaban xilliga qaboobaha. Jeffersonium shaki ku jiraa abid April ilaa 2 asbuuc. Ubaxa wuxuu ku koraa dhinaca toosan, taas oo ah mid dheer sida caleen ama wax yar ka dheer. Waxay u egyihiin sida xiddigaha lixaad leh, lilac-buluug. Dhexdhexaad ah 20-25 mm.
Miraha dhirta waa sanduuqyo elongated kaas oo miraha bislaadaan. Inta badan waxay ku dhuubtaan caleemo qaro weyn.
Qaybinta iyo ecology
Jeffersonian shaki wuxuu u qaybiyey Bariga Dhexe ee Ruushka, isaga oo la xariira gobollada woqooyi bari ee Shiinaha, iyo sidoo kale qayb ahaan Waqooyiga Kuuriya. Waxay badanaa ku koraan kaymaha kaydi isku dhafan, mararka qaarkood ku xoortay geedo iyo cows. Waxay jecel yihiin ciidda dabacsan oo hodan ku ah humus.
Geedka waxaa ku jira qadar ballaaran oo berberine ah - alkaloid, oo leh waxyaabo gaar ah oo bogsoon leh. Waa 3-5% rhizomes iyo 1.5% caleemaha. Saponins iyo alkaloids ayaa ku jira xididada, iyo alkaloids uun ayaa ku jira caleemaha.
Waxaad noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato dhirta daaweynta ee ugu faa'iido badan.
Sidoo kale qayb ka mid ah dhirta this waxaa ka mid ah:
Geedo iyo dhirta Jeffersonian waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn. Inta badan, iyada oo ku saleysan ee maraq la kariyey.
Decoction ee rhizomes waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada faafa, kor u cunto rabitaanka, hagaajinta aragga, iyo in la dhaqo indhaha guban.
Decoction ee caleemo - ee loogu talagalay daaweynta xanuunka raaga ee joogtada ah.
Hoos waxaa ku yaal cuntada sida sameynta decoctions.
Nambarka 1aad - oo leh xanuunka gaduudka oo leh hoos u dhicid:
Shub 1 qaado oo qalajiyey, la jarjarey oo la jarjarey galaas biyo ah, karkari kuleylka kulaylka ah 3 daqiiqo, ka bax ugu yaraan hal saac, ka dibna adkee. Qaado 1/4 koob oo 3 jeer maalintii muddo 40 daqiiqo ah cuntada ka hor.
Waa muhiim! Jeffersonium Dubious si rasmi ah looma diiwaan gashan yahay geedka daawada.
Nambarka 2aad - ee daaweynta cudurrada faafa:
In 0.5 litir oo biyo ah, ku dar 2 qaado oo baradho la qalajiyey, oo isku kari ilaa 1 saac. Qaado mugga 100 ml 4 jeer maalintii oo dhan.
Cawska (qaybta abbedeground) waxaa la goostay xilliga dayrta hore, xididdada - bisha Oktoobar ilaa Noofembar, marka caleemaha ay dhintaan. Maadaama ay yihiin kuwo jilicsan, waa in la bilaabaa inay qodaan fogaan ah 10-12 cm baadiyaha. Rhizomes gooyay, si deg deg ah loo dhaqay oo loo kala soocay, ka saareen qaybo dhintay.
Ka dibna alaabta ceeriin ah ayaa la qalajiyaa hawada, faafinta dusha sare ee lakabka keliya.
Ku kaydi bacaha wax lagu qurxiyo aagga si fiican u neefsanaya muddo aan ka badneyn 2 sano.
Waa muhiim! Baqashada xididada waxay u baahan tahay waqti aad u gaaban, sababtoo ah walxaha firfircoon ee warshadu waxay si fiican u milmaan biyaha.
Jeffersonia waa warshad beereed oo weyn, waxay leedahay dabo-jecel oo aan qabin daryeel, taas oo ah weyn oo lagu daray beerta. Sida caadiga ah, waxaa jira meelo badan oo har leh oo beerta ku yaal, iyo dhirta intooda badan sida meelaha qorraxda. Sidaa darteed, jeffersonium waxay leedahay faa'iido weyn. Si kastaba ha ahaatee, ha ilaawin xakamaynta qorraxda tooska ah.
Maanta waxaa jira noocyo kala duwan:
Alba ("Alba") - ubax midab cad oo leh stamens huruud ah;
Sunago-fu ("Sunago-fa") - ubender leh ubax waaweyn oo caleemo lacag-cagaaran;
Flore Pleno ("Flore Pleno") - ubaxa foomka terry.
Bush wuxuu si tartiib ah u korayaa, wuxuu u kori karaa hal meel ilaa 15 sano.
Primrose si fiican ayuu u socdaa dhagxaan. Dhagaxyada qurxinta leh ee qurxinta leh ee quruxda yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee casaanyada, casaan buluuga ah. Waxaad ka abuuri kartaa beerta dhagax weyn oo dhirta lagu dhajin karaa geesaheeda ugu adag.
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo tirada yar ee jefferson marka ay abuurayso qaababka muuqaalka.
Kobcinta iyo abuurista guriga
Jeffersonia waa warshad dilka ah, waxay ku kori kartaa hal meel muddo ka badan 10 sano iyada oo xaalado guulo ah laga gaaray horumarintooda. Mararka qaar waxa ay ku kordhineysaa is-goosashada, haddii ay ku jirto hooskii qayb ahaan iyo waxa uu leeyahay biyo ku filan.
Beerto iyo taranta
Waxaa suurtagal ah in lagu faafiyo jeffersonia hababka noocaas ah:
beerashada abuurka dhulka;
beerto geedo dhulka.
Abuurka Jeffersonian ma laha hantida lagu kaydiyo waqti dheer, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in lagu beeray ciidda isla markiiba ka dib markii Bisaylkiisa - in July. Cagaarka abuurku waa mid aad u hooseeya. Caleemaha qarxay waxay ka kooban yihiin hal caleen. Sannadka soo socda ayaa ubax noqon kara, laakiin kiisaska intooda badan waxay dhacdaa 3-4 sano. Shimbiraha Jeffersonian shakiga ah Warshad dhalinyaro ah waa in la waraabiyo marba mar.
Seed for geedo guriga
Seeds lagu beeray karaa geedo - waa in la sameeyaa dhammaadka Janaayo. Dhulku waa inuu ahaadaa waxoogaa acidic ah, godadka dheecaan ayaa lagama maarmaan u ah weelka lagu beerayo. Abuurka waxaa la dhigay, ma aha badan oo cadaadinaya dhulka, ka dibna ku rusheeyeen dhulka yar. Waa lagama maarmaan in la biyaha dhexdhexaadiyo.
Ka dib markii abuur ah Gagaash, waxaad u baahan tahay si aad u daboosho weel leh polyetylen si loo abuuro aqalka dhirta lagu koriyo. Waxaa lagama maarmaan ah in la quusiyo ka dib muuqaalka caleen ee ku yaalla safafka. Waqti ka dib, waxay u baahan yihiin in ay abuur, iyo beeray dhulka ku dabayaaqadii xagaaga.
Seeds in dhulka
Si arrintan loo sameeyo, dooro meel mugdi ah, qoyan. Abuurka u bislaaday waxaa la geliyaa dusha sare wax yarna ku rusheeyaa korkiisa. Waa lagama maarmaan in la hubiyo in dhulka uusan engegin, si joogto ah u waraabiyo.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido sida leysugu dhejiyo gacmahaaga iyo boorsooyinka qashinka, iyo sidoo kale sida loo dhiso god adag.
Qaybinta xayawaanka waa habka ugu muhiimsan ee taranka jeffersonian. Dhirta wanaagsan ee loo diyaariyay ayaa loo qaybiyaa 3-5 gogo ', laakiin aan ka badneyn. Qaybinta waxaa si wanaagsan loo qabtaa bisha Sebtembar, inta lagu jiro roobabka. Waa lagama-maarmaan in dhulka la dhigo meelo yaryar.
Si fiican u kori karaa dabacsan, carrada qoyan. Marka samaynta bacriminta, maaha lagama maarmaan in la qodo dhulka, dharka u baahan yahay in lagu kala firdhiyo qadar yar oo u dhow baadiyaha. Cuntadu waa inay ahaato muddo gaaban illaa dayrta illaa dayrta. Bacriminta dabiiciga ah ayaa ku habboon: compost, humus, peat.
Bacriminta dabiiciga ah sidoo kale waxaa ka mid ah: xayawaanka xayawaanka, cuntada lafaha, cuntada kalluunka, diirka baradhada, qolofta ukunta, maqaarka muuska, diirka basasha, nettle iyo dhuxul.
Waraabinta maahan mid aad muhiim u ah, laakiin waqtiyadaas oo kale ma jiro qalajinta ciidda. Xoojinta waraabinta tooska ah waxay ku xiran tahay meesha uu baadiyaha u koraayo: haddii ay ku jirto mugdi, qoyan qoyan, waa dhif, haddii kale waa badanaa inta badan. Ha ogolaanin qalajinta xoog leh ee dhulka, gaar ahaan maalmaha xagaaga kulul.
Jiilaalka iyo caabbinta barafowga
Caleemaha Jeffersonian waxay u koraan xagga barafka. Warshadu waxay u dulqaadataa si fiican u qaboojinta iyo qaboobaa jiilaalka aan lahayn hoy.
Warshad Tani waxay u adkaysato cudurada, marar dhif ah ayaa ku dhufta cudurada iyo weerarada cayayaanka. Laakiin inta badan waa dhacdo in cudur fungal burburiyo beerto, khatarta tani waa mid aad u weyn marka ciidda qoyan yahay. Cuntooyinka fangaska ku dhaca caleemaha iyo xididdada. Daaweyn, waxaad isticmaali kartaa "Fitosporin" ama "Chistosad".
Slugs iyo shinbiraha ayaa cuni kara caleemo. Waxay ku beeri doonaan dhulalka qoyan. Cayayaanka waa la qaadi karaa gacanta, inta badan waxay u muuqdaan tiro yar.
Ma taqaanaa? Jeffersonia waxay heshay caddayn gaar ah "shaki" iyadoo ay ugu wacan tahay caqabadaha cilmi baarayaasha St. Petersburg. Markii ugu horeysay ee warshadan waxaa lagu sharraxay Karl Maksimovich. Markii uu shaqadiisa u soo bandhigay asxaabtiisa, aqoonyahanada, ka dib khilaafaad dheer, waxay ku sheegeen Jefferson qoyskii Barbariska, laakiin tan iyo markii qaar ka mid ah botanisku aysan ku raacsaneyn go'aankaas, waxaa loo xilsaaray epithet "shaki".
Sidaa darteed, jefferson waa shaki - waa warshad aad u fiican beerta. Waa mid aan qabyo ahayn oo si fiican u dhammaystirta qaab kasta oo ubaxa beerta. Marka lagu daro muuqaalka quruxda badan ee asalka ah, waxay kuu mahadcelineysaa daryeelka iyo sifooyinka bogsashada.